हेमाले रुँदै भनिन्– ‘छविले मलाई २६ वर्षसम्म रुवायो, यी अपराधी हुन् जेल हालेरै छोड्छु’ (भिडियाे) | Makalukhabar.com
साउन २६, काठमाडौं । अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले आफूमाथि घरेलु हिंसा भएको भन्दै निर्माता छविराज ओझासँग डिभोर्सका लागि प्रक्रिया चालिरहँदा छविकी जेठी श्रीमती हेमा ओझाले उनीहरुविरुद्ध बहुविवाहको मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाइरहेकी छिन् ।
हेमाले साउन ५ गते आइतबार शिल्पा र छवि दुवैलाई तत्काल पक्राउ गरेर कारवाही अघि बढाउन महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा बहुविवाहको उजुरी दिएकी थिइन् उजुरी दर्ता भएपछि शिल्पा र छवीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । अहिले दुवै फरार छन् । अहिले मुद्दा उच्च अदालतसम्म पुगेकाे छ ।
उच्च अदालतले पनि पक्राउ गर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा छविकी जेठी श्रीमती हेमाले आफूलाई छविले २६ वर्षसम्म रुवाएको भन्दै सजाय दिलाएरै छोड्ने दाबी गरेकी छिन् ।
एक युट्युब च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा हेमाले छविलाई साथ दिएको भन्ने टिकाटिप्पणीको खण्डन गर्दै पहिला प्रमाण नभएका कारण चुप लागेर बसेको र हाल प्रमाण प्राप्त भएपछि छविलाई सजाय दिलाउनतिर लागेको बताईन् । यो मामिलामा छवि–शिल्पा दुवैको गल्ती भएको उनको भनाइ छ ।
आफूले बोलाएको समयमा घर आउने, बच्चाहरुको लालनपालनका लागि खर्च दिने, न्वारन, व्रतबन्ध लगायतमा सरिक हुने, छोराहरुलाई पढाइदिने भएका कारण अर्को विवाहको हल्ला चलेपनि, शंका लागेपनि आफूले रुनुबाहेक केही गर्न नसकेको हेमाले गुनासो गरिन् ।
‘‘गीताञ्जलीसँग उहाँको अफेयर चलेको समयमा मैँले उहाँलाई काठमाडौंबाट घरमै बोलाएर परिवारसँगै राखेर कुरा गरेको थिएँ । त्यो बेला उहाँले ‘फिल्म् लाइन हो, हल्ला चलिहाल्छ नि । प्रमाण देखाउन’ भन्नुभयो । परिवारले पनि ‘विना प्रमाण कसरी भन्ने, चलचित्र लाइन हो, अलिअलि हल्ला त चलिहाल्छ नि’ भन्नुभयो । त्यसैले म रोएर चुप बसेँ । चित्त बुझाएँ’’, हेमाले भनिन् ।
हेमाले थपिन्, ‘मिडियामा छविविरुद्ध शिल्पाको उजुरी र विवाहदर्ताबारे ज्यादा चर्चा भएपछि मैँले छोरो लगाएर प्रमाण खोजेँ । म पनि त त्यसको श्रीमती हुँ नि ! उसँग छुट्टीएकी पनि छैन । मैँले न्याय पाउनुपर्दैन ? मलाई सरकारले न्याय दिलाउनुपर्छ । ती दुई छोरा उनैका हुन् । म पनि उनैको श्रीमती हो । उनले कमाएको सम्पत्ति खाने यी दुई छोरा र म नै हो । खोज्छु नि न्याय, दिलाउँछु सजायँ ।’
शिल्पाले मिडियामा आएर आफ्नो र परिवारको इज्जत उछालेको उनको आरोप छ । उनि भन्छिन्, ‘शिल्पाले मिडियामा आएर म र मेरा छोरा, परिवारमाथि आरोप लगाइन् । हाम्रो इज्जत उछालिन् । जबकि म २६ वर्षदेखि सहेर बसेकी थिएँ । आफ्नो इज्जतमा दाग लागेको कसरी सहनु ? शिल्पाले हाम्रो जिन्दगीमा जहर घोलेकी छिन् । त्यसैले न्याय खोज्दै हिँडेकी हुँ म ।’
आफूले २६ वर्षदेखि पीडा खेपेको कसैले नदेख्ने, उनका एक वर्षको पीडा चाहीँ सबैले सुन्नुपर्ने ? म चाहीँ सधैँ अन्यायमै बस्नुपर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरिन् । शिल्पाले आफ्नै गल्तीका कारण दुःख, पीडा खेप्नुपरेको पनि उनले स्पष्ट पारिन् । अर्काका श्रीमानसँग विवाह गर्दा कुनैपनि नारीले १० पटक सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘भगवान् पनि रहेछन् । उनले मलाई साथ दिए । उनीहरुको सय दिन आउँदा मेरो पनि एक दिन त आयो नि । अब मलाई न्याय चाहियो । आज म रुन्छु । मेरो आत्मा रोएको छ । साँच्चै रोएको छ । मलाई निकै पीडा दिएका छन् ती बुडाले । समाज त छन् नि मेरा । सबैले देखेका छन् मेरो पीडा । म यीनीहरुलाई छोड्दिन । मेरो आत्मा दुख्यो । इन्साफ भगवानले दिन्छन् यीनीहरुलाई । महाभारतमा जस्तै सत्यको विजय हुन्छ, हुन्छ । यीनीहरुलाई म थुनाएरै छोड्छु । जतिबेला पनि यीनीहरुले मलाई पीडा दिने ? मैँले संसारमा बाँच्न पाउँदिन ? यीनीहरु अपराधी हुन् । सजाय पाउनैपर्छ’, हेमाले भनिन् ।
नायिका ऋचाले गरिन् विवाह
मंसिर २२, काठमाडौं । नायिका तथा मोडल ऋचा शर्माले आफ्नो प्रेमी दिपेक्ष विक्रम राणासँग विवाह गरेकी छिन् । राणा लबीम मलका म्यानेजर हुन् । शनिबार उनीहरु विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन् । ऋचाले आफ्नो विवाहको तस्विर सार्वजनिक गरेकी छिन् । केही दिनपछि नव दम्पतिले विवाहको रिसेप्सन पार्टी दिँदैछन् । ऋचा शर्मा ने... जारी राख्नुहोस...
‘लौन कान्छी खै’ भन्दै सूर्यमनी आए बजारमा (भिडियाेसहित)
मंसिर २२ काठमाडौं । गायक सूर्यमनी आचार्यको स्वरमा रहेको ‘लौन कान्छी खै’ बोलको भिडियो बजारमा आएको छ । संगम थापको शब्द रहेको प्रेम भाब झल्कने उक्त दाेहाेरी गीतमा युवा समाझसेवी पुरुषोतम धिताल र सुमधुर स्वरकी धनी गायिका गंगा ठकुरीले पनि आवाज दिएका छन् ।मामा भान्जा युट्युब च्यानले सार्वजनिक गरिएको भिडियो... जारी राख्नुहोस...
भोटिङको दोस्रो स्थानमा नेपालकी चेली अनुष्का
मंसिर २०, काठमाडौँ । डिसेम्बर १४ मा हुन लागेको मिस वर्ल्ड २०१९ प्रतियोगिताकाे भोटिङ स्टिममा नेपालकी चेली अनुष्का श्रेष्ठ दोस्रो स्थानमा रहेकी छिन् । हाल लण्डनमा रहेर मिस वर्ल्ड २०१९ काे तयारीमा जुटेकी अनुष्काले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै छिन् । उने विश्वभरबाट आएका १ सय २४ सुन्दरीसँग प्रतिष्पर्धा गर... जारी राख्नुहोस...
फ्राइडे रिलिजमा दुई नेपाली चलचित्रको टक्कर बलिउडसँग
मंसिर २०, काठमाडौँ । फ्राइडे रिलिजको परम्परालाई धान्दै आजबाट दुई नेपाली चलचित्र एकसाथ प्रदर्शनमा आएको छ । आजबाट सुनिल गुरुङको डेब्यु निर्देशन तयार भएको चलचित्र ‘माछा माछा’ र निर्देशक टेक पौरखीद्वारा निर्देशित चलचित्र ‘माया पिरिम’ एकैसाथ प्रदर्शनमा आएको हो । यी दुई नेपाली चलचित्र कमेडी जनरामा तयार पा... जारी राख्नुहोस...